Ekhaya | TRINITY
I-TRINity ibonelela ngezisombululo zefanitshala zehlabathi zeendawo ezihlanganayo.
Imeko yefanitshala yehotele yeNkwenkwezi
Inkonzo yeFenitshala yeZindlu eziSebenzisiweyo
Imeko yeFenitshala eNgxilisiweyo
Ityala lefanitshala yendawo yoLuntu
Imeko yefanitshala yeNdawo yokuHlala
Imeko yefanitshala yefanitshala
I-TRINITY Ifanitshala uMyili weFenitshala
UFoshan Zhongsen （UQINISO） ubonelela ngezisombululo zefanitshala ezikhethekileyo zehotele, iiNdawo zokuchithela, iVillas, igumbi kunye nezinye iindawo ezidibeneyo ezinje ngeeNdawo zokudlela nezakhiwo zikawonkewonke.
Yenza ezona mveliso ezisemgangathweni zishishini kwaye wenze iimveliso ezigqwesileyo.
UQINISO ngumenzi wefanitshala othengisa ifanitshala onokubonelela ngezisombululo zefanitshala.
IPHEPHA LOKUFUNDAIgama eliphambili: Ifanitshala yehotele.Uhlobo lwefanitshala: ifanitshala yehotele.Ukusetyenziswa okuthile: Ihotele ihotele.Isicelo: Ihotele, iRekosta, indawo yokuhlala, igumbi lenkonzo, iVilla, irestyu, ezinye iindawo zikawonke-wonke.Isitayile soyilo: Yilo lwale mihla.Izixhobo: Iinkuni eziqinileyo, iphaneli, isikhumba, ilaphu, intsimbi, imarble. (Ngokweemfuno zabathengi)Izatifikethi: ISO9001 / SGS / PEFC.
I-Suite yePronil Mobin Igumbi - Ifenitshala yeHoteni
I-Suite yePronil Mobin Igumbi - Ifenitshala yeHoteniIgama eliphambili: ifanitshala yesiko lehotele.IProjekthi yehotele: I-Mai Hound Saigon Ihotele-Inkwenkwezi eyi-5 ihlawulwe.Uhlobo lwefanitshala: ifanitshala yehotele.Ukusetyenziswa okuthile: Ihotele ihotele.Isicelo: Ihotele, iRekosta, indawo yokuhlala, igumbi lenkonzo, iVilla, irestyu, ezinye iindawo zikawonke-wonke.Isitayile soyilo: Yilo lwale mihla.Izixhobo: Iinkuni eziqinileyo, iphaneli, isikhumba, ilaphu, intsimbi, imarble. (Ngokweemfuno zabathengi)Izatifikethi: ISO9001 / SGS / PEFC.
Igumbi lemodeli ye-Suite - Igumbi lePhepha leThelili
Igumbi lemodeli ye-Suite - Igumbi lePhepha leTheliliIgama eliphambili: igumbi lendlu yegumbi lefenitshala.Uhlobo lwefanitshala: ifanitshala yehotele.Ukusetyenziswa okuthile: Ihotele ihotele.Isicelo: Ihotele, iRekosta, indawo yokuhlala, igumbi lenkonzo, iVilla, irestyu, ezinye iindawo zikawonke-wonke.Isitayile soyilo: Yilo lwale mihla.Izixhobo: Iinkuni eziqinileyo, iphaneli, isikhumba, ilaphu, intsimbi, imarble. (Ngokweemfuno zabathengi)Izatifikethi: ISO9001 / SGS / PEFC.
IPHEPHA LOKUGQIBELA LWEZIFUNDO - IPHULO LOLWAZI
IPHEPHA LOKUGQIBELA LWEZIFUNDO - IPHULO LOLWAZIIgama eliphambili: Ifanitshala yehotele yeBoutique.Uhlobo lwefanitshala: ifanitshala yehotele.Ukusetyenziswa ngokuthe ngqo: igumbi lokulala lasekhaya.Isicelo: Ihotele, iRekosta, indawo yokuhlala, igumbi lenkonzo, iVilla, irestyu, ezinye iindawo zikawonke-wonke.Isitayile soyilo: Yilo lwale mihla.Izixhobo: Iinkuni eziqinileyo, iphaneli, isikhumba, ilaphu, intsimbi, imarble. (Ngokweemfuno zabathengi)Izatifikethi: ISO9001 / SGS / PEFC.
Sisaqhubeka nokuxhomekeka ekukholekweni nakwinkolelo, ukubukela iimveliso ukuqhubeka nokuphucula, kwaye ekugqibeleni, kuphela ngemigangatho ephezulu esinokuthi siphumelele kukhuphiswano lwexesha elide!
Njengophawu lwesisombululo sangaphakathi sokwamkela iindwendwe, siyazingca ngeNkqubo yokuPhela yokuPhela eyilelwe ukuzisa elona xabiso liphezulu kwiprojekthi nganye esiyenzayo. Ngaphandle kwenkqubo yethu yokuGqibela ukuPhela, sineefektri zethu ezingaphakathi endlwini ezivumela abathengi bethu ukuba bonwabele ezona zibonelelo zihlanganisiweyo kwiindleko, umgangatho kunye nokusebenza kakuhle.
Sineefektri zethu ezingaphakathi ezindlini ezivumela abathengi bethu ukuba bonwabele ezona zibonelelo zihlanganisiweyo kwixabiso, umgangatho kunye nokusebenza kakuhle. I-TRINity ibonelela ngenkonzo yesiko lefanitshala yehotele kwaye inikezela ngezisombululo zefanitshala.
Le nkampani iye iminyaka engaphezu kwama-20 yamava ulwenziwo ifanitshala ehotele, izisombululo ifanitshala yehotele, ufakelo on-site, njl
Iimveliso ezinomgangatho oQinisekisiweyo-
Inkqubo yazo zonke iimveliso kufuneka icwangciswe ngokungqongqo kwaye iphonononge ukugqithisa, qinisekisa ukuba zonke iinkcukacha zemizuzu ezizodwa ziyahlangabezana ngokufanelekileyo nemirhumo yomthengi.
Indawo eyiNtloko yeNdawo
I-Foshan Zhongsen IN I-TRINITY） ifenitshala ye-Co, Ltd. isembindini wokuthumela kwi-Pacific, e-Indiya nakwiilwandlekazi lweAtlantic, nto leyo ithengiswa yiTshayina e-Southeast Asia, e-Oceania, kwi-Mbindi Mpuma nase-Afrika.
Nokuba bangabaphathi beprojekthi yehotele, abaphathi babathengi, abayili bezakhiwo, abaphathi abathenga kunye nabasebenza ngefanitshala yehotele, bonke banemvelaphi eyahlukileyo kwaye babelana ngokuthakazelela ukwenza umsebenzi obalaseleyo.
Uninzi lwezinto esiziphumezayo esizinikezelayo zenziwe ngokwezifiso - saphucisa imiceli mngeni eyodwa abayenzayo.
IZhongsen liqabane elifanelekileyo kunye nomenzi wefenitshala ehotele ephuhlisiweyo.
Uninzi lweeprojekthi esizinikayo zenziwe ngokwezifiso, kwaye siyonwabela imiceli mngeni eyodwa ezizisa yona. Abaqulunqi bethu bemveliso engaphakathi endlwini banokunikezela ngeengcebiso ezixabisekileyo zeengcali kwizixhobo kunye nokuhonjiswa ngelixa beqinisekisa ukuba uyilo lumi ngesitayile kwaye luqinile. Yakube ivunyiwe, oko kuthetha ukuba amandla ethu emveliso yangaphakathi endlwini anakho ukuphatha izinto kunye neemveliso ezigqityiweyo. Sinokukhangela ngokukhawuleza izinto ukuze zifezekise ixesha elibekiweyo. Nxibelelana ne-TRINity ukubonelela ngezisombululo zefanitshala efanelekileyo.
I-OEM Izisombululo zeSiko
Qhubeka ukhomba iimveliso zakho uqhubekeke uphucula ubugcisa bakho.
Isiko lenze impahla yegumbi legumbi lendawo yegumbi le-Ilathi laseMelika JW Marriott SPA
I-shien finn chine china ezintlanu zoyilo lwe-IHGG IHGG HOLD
I-shien finn chine china ezintlanu zoyilo lwe-IHGG iHGG iHoteli ye-IHG.
Iinkwenkwezi ezintlanu I-St Regis yeProteli
Ifenitshala ye-Itali yase-Itali yase-Italiyane ye-Italiyane